ရွယ်ရွယ် - အလွမ်းနဲ့တမ်းချင်း [2015 Album] (MP3 128Kbps!) [Update ! Download Link] - Mg Shan Lay
Home Album Oasix Su Sandi Htun ရွယ်ရွယ် ရွယ်ရွယ် - အလွမ်းနဲ့တမ်းချင်း [2015 Album] (MP3 128Kbps!) [Update ! Download Link]
ရွယ်ရွယ် - အလွမ်းနဲ့တမ်းချင်း [2015 Album] (MP3 128Kbps!) [Update ! Download Link]
1:52:00 AM Album, Oasix, Su Sandi Htun, ရွယ်ရွယ်,
ရွယ်ရွယ် - အလွမ်းနဲ့တမ်းချင်း [2015 Album] (MP3 128Kbps!)
အချစ်ပြိုင်ပွဲ [Feat. Oasix]
သို့ . . မကြင်နာသူ
​မေတ္တာလက် တစ်စုံ [Feat. Su Sandi Htun]
ကယ်သူမယ့်အလင်း (Bonus Track) [Feat. Oasix]
Tags # Album # Oasix # Su Sandi Htun # ရွယ်ရွယ်
Labels: Album, Oasix, Su Sandi Htun, ရွယ်ရွယ်